Dhibaatooyinka Dayactirka ee Degdegga Ah | LawHelp Minnesota
Dhibaatooyinka Dayactirka ee Degdegga Ah
Emergency Repair Problems (PDF)318.83 KB
Court form: Emergency Tenant Remedies Action Petition (PDF)600.13 KB
Waa maxay dayactirka degdegga ah ee dhibaatooyinka?
Dayactirka degdegga ah ee dhibaatooyinka waa marka aadan heysan:
Makiinadda cuntada lagu karsado
Musqul aad isticmaasho
Adeegga aasaasiga ah ama dhismayaasha sida albaabka hore ama dambe oo maqan, ama daaqad maqan.
Guri dhaqan ka bax ah ama ogeysiis looga dhigayo dhaqan ka bax waa xaalad degdeg ah, maadaama ay taasi ka dhiagn tahay guriga oo dhan in aan lagu noolaan karin. Amar kasta oo uu soo saaro kormeeraha magaalada uu ku marayo in laga guuro hoyga aad degan tahay waa xaalad degdeg ah, oo ay kamid tahay haddii ay ka mid tahay maadaama uusan kireeyuhu heysan ogolaashaha kirada.
La socodsii kireeyaha markiiba. Haddii aanu kireeyuhu dooneyn inuu sameeyo dayactirka ama hagaajiyo xaaladda degdegga ah, waxa aad maxkamadda ka diiwaan gelin kartaa Talaabada Degdegga Ah ee Looga Daayo Kireystaha (ETRA). ETRA waxaa kale oo lagu magacaabaa talaabada degdegga ah ee hawsha looga daayo. Waxaa wanaagsan in aad leedahay qareen ku caawiya si aad u diiwaan geliso ETRA laakiin kaligaa waad qabsan kartaa. La soo xiriir xafiiska degaankaaga ee gargaarka sharciyada si ay kuu caawiyaan ama kuula taliyaan.
Sidee Ayaan u Diiwaan Geliyaa Talaabada Degdegga Ah ee Looga Daayo Kireystaha (ETRA)?
Si aad u diiwaan geliso hubi in aad sameyso waxyaabaha soo socda:
Buuxi foomka halkan ku lifaaqan. Waxaa kale oo aad foomkan aad ka heli kartaa maxkamadda.
Waa in aad wargelisaa kireeyaha 24 saac ka hor inta aadan ka diiwan gelin maxkamadda.
Haddii aadan la xiriiri karin kireeyaha, fariin u dhaaf si aad u gaarsiiso ogeysiiska 24ka saac.
Ogeysiiska 24ka saac, wargeli kireeyaha xaaladda degdegga ah ee ka jirta guriga oo aad dooneyso in la hagaajiyo 24 saac gudahood ama aad diiwaan gelineyso ETRA. Waa muhim in aad gaarsiiso kireystaha in aad maxkamadda ka diiwaan gelin doonto.
Haddii aanu kireeyuhu waxba ka qaban xaaladda degdegga ah 24 saac gudahood marka aad gaarsiiso ogeysiiska, waxa ad maxkamadda u gudbin kartaa ETRA?
Haddii aad isku daydo in aad la xiriirto kireeyaha si aad u gaarsiiso ogeysiiska 24ka saac ah, laakiin aadan helin, waa in aad maxkamadda ka diiwangelisaa.
Lacag ayaa lagaa doonayaa si aad uga diiwaan geliso maxkamadda.. Haddii uu dakhligaagu yar yahay, waxa aad buuxin kartaa foomka (IFP) oo codsan kartaa in lacagta diiwaangelinta lagaa daayo. Foomkaas maxkamadda ayaad ka heli kartaa mid kala soo bax barta internetka (ingiriisi kaliya) adiga oo ka jawaabaya su’aalaha http://www.lawhelpmn.org/forms (ingiriisi kaliya).
Guji Foomka Ka Dhaafidda Kharashka Diiwaan Gelintar (IFP)
La imoow cadeyn muujineysa in dakhligaagu yar yahay, qeybta dambe ee jeegga mushaharka, ama cadeyn muujineysa gargaarka aad dawladda ka qaadato.
Marka aad ETRA codsato, waxa aad codsan kartaa in dhageysiga maxkamadda degdeg loo qabto, inta badan 3-7 cisho oo maalmaha shaqada ah. Waxa ay u badan tahay in maxkamaddu amarto in kirteeyuhu dayactirka sameeyo, loona qabto balan kale oo looga hadlo kirada iyo lacag magdhaw ah dhibaatada ku gaartay.
Maxaan weydiisan karaa in maxkamaddu amarto?
Waxaa kale oo maxkamaddu weydiisan karaa in ay amarto:
In kireeyaha la amro inuu dayactir sameeyo markiiba.
Inuu kuu ogolaado inaad dayactirto oo kirada aad ka jarato.
In qof kale dayactirka sameeyo oo maamulo guriga.
Kirada yareeyo ilaa dayactirka laga saeeyo.
In kireeyuhu bixiyo kharashka hoteelka, ama dib kaa siiyo haddii aad dooneyso in aad qof kale la degto.
In kireeyuhu ku dayo meel kale aama uu kharashka aad meel kale ugu guurto.
Maxkamadda waxa aad weydiisan kartaa magdhaw lacageed lagaa siiyo dhibaatada ku gaartay. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in lacag lagaa siiyo waxyaabaha ay ka mid yihiin:
Laguu soo celiyo lacagtii aad ku bixisay kirada intii ay dhibaatadan socotay.
Lacagta kaa duntay dhibaatada kugu dhacday darteed, sida in aad meel kale degto. Keen cadeynta, sida lacag qabashada ama jeeggaga aad lacagta ku bixisay.